“Thank you all Sponsors, Attendees and Volunteers”
See you all at our next event.
Fill Survey Form to improve our next event.
Download Presentation files here.
MM 2020 Event Report
Date : 13-Jan (Mon) to 17-Jan-2020 (Friday)
Venue : MICT Park, Yangon, Myanmar
ရက်စွဲ။ : ၁၃-ဇန္နဝါရီ (တနင်္လာ) မှ ၁၇-ဇန္နဝါရီ (သောကြာ) နေ့ထိ
တည်နေရာ : မြန်မာ အိုင်စီတီဝင်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
This event will bring together Internet Business Leaders, Internet Experts and Networking Engineers, networking professionals, technical communities, Government representatives, Network Operators, Content Providers, International Organizations, and other interested parties. This event will provide great opportunities for peering, interconnection and advanced technical knowledge, learn from workshops and tutorials, attend technical presentations, update each other on their work, share news and updates, exchange best practices, discuss new technologies or protocols, teach and learn from each other, network with other members of the community, and discuss current network, Internet-related issues and challenges.
အင်တာနက်လုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သော စီးပွါးရေး ဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပညာရှင်များ၊ အင်ဂျင်နီယာများ၊ ၊ နက်ဝဂ်ပညာရှင်များ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ လူမှု့အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု့ပေးနေသော လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အင်တာနက်မှတဆင့် ဒေတာ ဖြန့်ဖြူး ပေးနေသူများ၊ အင်တာနက် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများ အား စုပေါင်းခေါ်ယူပေးပြီး အောက်ပါ အခွင့်အရေးများ ဖန်တီးပေးသည့် ပွဲ့ဖြစ်ပါသည်။
နက်ဝဂ်များ အချင်းချင်းချိတ်ဆက်နိုင်ရန် ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်း၊ နည်းပညာ အသစ်များ ရယူနိုင်ခြင်း၊ သင်တန်းများ၊ ဟောပြောပွဲများ တက်ရောက်နိုင်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာများနှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ ဖလှယ်နိုင်ခြင်း၊ ပညာရှင်များနှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်း၊ အဖွဲအစည်းများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များ အချင်းချင်းမိတ်ဖွဲ့ နားလည်နိုင်မှု့ ရယူနိုင်ခြင်း၊ အင်တာနက်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ညှိနှိုင်း အဖြေရှာနိုင်ခြင်း စသည့် အခွင့်အရေးများ ဖန်တီးပေးသည့် ပွဲကြီးဖြစ်ပါသည်။
နောက်ထပ် အသေးစိတ် လေ့လာရန်>>
Internet Business Leaders, Internet Experts and Networking Engineers, networking professionals, technical communities, Government representatives, Network Operators, Content Providers, International Organizations, and other interested parties.
ဘယ်သူတွေ တက်သင့် သလဲ
အင်တာနက်လုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သော စီးပွါးရေး ဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပညာရှင်များ၊ အင်ဂျင်နီယာများ၊ ၊ နက်ဝဂ်ပညာရှင်များ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ လူမှု့အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု့ပေးနေသော လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အင်တာနက်မှတဆင့် ဒေတာ ဖြန့်ဖြူးပေးနေသူများ၊ အင်တာနက် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများ။
ပါဝင်မည့် အစီအစဉ်များ လေ့လာရန်>>
+959957641232
+95 1 652280
+၉၅ ၉ ၉၅၇၆၄၁၂၃၂
+၉၅ ၁ ၆၅၂၂၈၀